China YF-H-211 Pink Velvet Nightstands 2 Drawers Wood Nightstand Bedside Table Gold Base Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-H-211 Pink Velvet Nightstands 2 Drawers Wood Nightstand Bedside Isiokwu Gold Base
Ngwakọta ngwakọta na-enwe obere oge, na Morrison Leather Nightstand na-agwakọta akpụkpọ anụ na mpụga ụkwụ ya na ụkwụ ya. Ihe osise abụọ na-ahapụ ọtụtụ ohere maka ekweisi, ihe nkpuchi anya, akara ngosi na ihe ndị ọzọ.
IHE: High gloss MDF board + Velvet + Igwe anaghị agba nchara ụkwụ
Style nke oge a: Na-egosi silhouette dị ọcha nwere isi ọla edo yiri nke U, ọ na-eme ka ikuku dị mma n'ụlọ gị n'oge a. A na-enweta ụcha pink site na nkedo aka, yabụ a ga-enwe obere agba / ụda dị na ibe ọ bụla. - a haziri tebụl akụkụ tebụl nke ọma na faux akpụkpọ anụ maka ebe dị mma na bọtịnụ kristal na-agbacha agbacha iji mepụta nshị anya
Nke a akpụkpọ anụ ọbọp nightstand atụmatụ abụọ sere drawer, na-ezu ike na tapered square ụkwụ. Dị na njedebe ọ bụla, nha, ma ọ bụ nhazi ọ bụla. A ga-enyerịrị ngwaike aka na-enye ohere maka ịhazi ọpụrụiche.
Nchekwa zuru ezu: Soro ndị na-ese ihe 3, ọ na-enye ụzọ dị irè ma dị mma iji nye nchekwa maka akwụkwọ akụkọ, ihe ịchọ mma, ekwentị mkpanaaka, wdg.
Mfe-Iji: Site na ịpịpụta ihe pụrụ iche iji mepee imewe, nkwụsị abalị a na-enye ọrụ na-enweghị isi na ọmarịcha amara.
Aka MDF jiri aka ya rụọ; MDF bụ osisi e ji arụ ọrụ nke na-enye ike pụrụ iche ma na-eme ka nrụgide nke onye na-akwa uwe wee bụrụ oge gafee.
Nnukwu ịba uru: Elu elu zuru ezu maka oriọna ụra na elekere mkpu. Ndị na-ese ihe 2 na-enye ọtụtụ ihe maka ihe gị.
Sturdy Construction: Ngwakọta zuru oke nke velvet bara ọgaranya, osisi siri ike na igwe anaghị agba nchara, abalị a siri ike ma sie ike ruo ogologo ndụ.
Enwere m olileanya na ị ga-anụ ụtọ ngwaahịa a. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ụdị aja aja gbara ọchịchịrị ka ịhọrọ n'etiti. Ezigbo mma maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ izugbe, agba ka mma ilekọta!
Nke gara aga: YF-H-210 Oge okomoko White & Gold 3 Drawers Bedroom Nightstand Square Bedside Table
Osote: YF-H-212 h Nightstand Up Bedstered Isiokwu Isiokwu na Igbe Igbe Gold Metal Base
YF-H-204 White Golden imecha Modern Nightstand ...
YF-H-208 2 Igbe Nightstand nke Oge A